Booliska la dagaalama rabshadaha ee Jarmalka oo la geeyay shirka xisbiga AfD ee Cologne - BBC News Somali
Booliska la dagaalama rabshadaha ee Jarmalka oo la geeyay shirka xisbiga AfD ee Cologne
22 Abriil 2017
Image caption Askar boolis ah oo xiran qalabka loo xirto rabshadaha xilli ay isu diyaarinayaan qalalaase ay suuragal tahay inuu dilaaco
Kumannaan boolis ah ayaa loo daadgureeyay magaalada Cologne, ee dalka Jarmalka, si ay wax uga qabtaan haddii ay rabshado ka dilaacaan dibadbaxyada ay dhigayaan kooxaha garabka bidixe ee ay kaga soo horjeedaan shirka xisbiga AfD.
Xisbiga AfD oo ah wadani u janjeera garabka midig kana soo horjeeda Islaamka, ayaa dooranaya inuu doorto hogaamiye cusub oo wax ka hogaamiya doorashada guud ee Jarmalka ka dhacaysa dabayaaqada sanadkan.
Dibadbaxayaasha Sabtida ayaa watay boorar ay ku qoran yihiin "Hor istaaga Naaziyiinta".
Booliska ayaa filaya 50,000 oo dibadbaxayayaal ah waxa ayna halkaa u daadgureeyeen ilaa 4,000 oo askari.
Madaxa booliska Juergen Mathias ayaa sheegay in xogta la helay ay tilmaamayso in ay halkaa iman doonaan "dhowr kun oo xagjir ah oo ka tirsan axsaabta garabka bidix" iyo "dhowr boqol oo qof oo rabshowadayaal ah" kuwaasi oo ka mid ah dadka dibaxbaxayaasha ah.
Hal askari oo boolis ah ayaa wajiga laga dhaawacay mar uu xubno ka tirsan xisbiga u waday goobta uu shirka ka dhacayo. Nin ayaana xabsiga la dhigay.
Subaxii Sabtida ayaa ku dhawaad 100 qof waxa ay isku dayeen inay jiiraan booliska oo ay u gudbaan dhinaca kale ee webiga Rhine halkaasi oo uu ka dhacayo shirka, waxaa sidaa ku warramay wargeyska Die Welt ee ka soo baxa dalka Jarmalka.
Bannaanka hoteelka 50-60 qof ayaa waxa ay isku gudbeen goobta iyagoo isticmaalaya baaskiilo isku taxan. Booliska ayaa dadkaasi kala kaxeeyay waxa ayna horseedday in boolisku ay isku dhacaan dibadbaxayaasha.
Shirkii Xisbiga AfD ee sanadkii hore ka dhacay magaalada Stuttgart ayaa waxaa lagu xiray boqolaal qof oo dibadbaxayaal ah.